Soomaaliya, 09 May 2019
Khamiis 9 May 2019
Iska hor-imaad ka dhacay garoonka Kismaayo
Ugu yaraan afar Askari ayaa ku dhaawacmay iska hor imaad galabta ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.
Jubaland oo sheegtay in 18 Shabaab lagu dilay duqeyn
Saraakiisha Ciidamada Daraawiishta Jubaland ee Soomaaliya ayaa sheegay in duqeymo dhinaca cirka ah oo 24-kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay qeybo ka tirsan Gobbolka Jubada Dhexe lagu dilay ilaa 18 ka tirsan maleeshiyaadka Kooxda Al-Shabaab.
Duqeymo xalay ka dhacay gobolka Bari
Bandhigga VOA: Kufsiyada ka dhaca Soomaaliya
Muran ka taagan xulista xildhibaanada cusub ee Jubaland
Magaalada Kismaayo iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Jubaland wali waxaa ka taagan khilaaf ku saabsan qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada cusub ee Jubaland ee dhowaan la dooran doono.
Sidee Ayey Qoysaska Soomaalida ee Columbus, Ohio Uga Faaiideystaan Adeegyada Caafimaad?
Barnaamijka waxa aan toddobaadkan ku soo qaadaneynaa adeegyada caafimaad ee dowaldda maraykank ugu talo gashay dadka Mareykanka, gaar ahaan kuwa danta yar oo ay Soomaalidu ka mid tahay.
IGAD oo Nairobi ka furtay shir looga hadlayo qaxootiga
Shir uu soo qaban qaabiyay Urur Goboleedka IGAD oo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka qaxootiga ee xuduudaha ka tallaaba iyo kuwa lagu qasbo inay ku barakacaan gudaha dalalkooda, ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi.
Dhaqanka Iyo Hiddaha, qeybta 470-aad
Shilalka baabuur oo kusoo badanaya Somaliland
Mudooyinkii u danbeeyey deegaanada Somaliland waxa ku soo badanaya shilalka gaadiika iyadoo 24-kii saacadood ee u danbeeyey ay ku waxyeeloobeen in ka badan toban qof kuwaasi oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ammaanka Masaajidada dalalka Yurub oo la adkeeyey
Galka Baarista: Xanuunada Dhimirka (Qeybtii Labaad)
Dadka qaba HIV/ADIS ee Somalia oo dhibaatooyin wajahaya
Dadka la nool xanuunka HIV/AIDS ee ku dhaqan Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay xilligan wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah.